६ महिनापछि खुल्यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन, नयाँ निर्देशिकाअनुसार परीक्षा — Sanchar Kendra
१अध्यक्षमा पराजित भएपछि पूर्वराजालाई कमल थापाको धम्की !
२महामन्त्रीमा कुन्तीसँग हारेपछि रेखा थापाले दिइन यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भनिन ?
३रेखा थापाको लज्जास्पद हार, उनको पक्षमा जम्मा कति मत आयो ?
४अध्यक्षमा लिङ्देनसँग हारेपछि कमल थापा फायर, क कसलाई के भने ?
५अब दैनिक दुई लाखलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने
६सरकारमा आउने ओलीको घोषणा
७नेपाली कांग्रेस गण्डकीको मतगणना जारी, कुन उम्मेदवारको मत कति ? यस्तो छ ताजा परिणाम
८एमसीसी र महाअभियोग दलहरुबीच सहमति नभई अगाडि बढ्दैन- प्रचण्ड
९बर्थ डे’ मनाउन गएका युवा फर्किएनन, होटल मालिकसहित ११ जना पक्राउ परेपछि खुल्यो यस्तो रहस्य
१०भारतमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण रोक्न मोदीले चाले यस्तो कदम, केछ नेपालको तयारी ?
११प्राधिकरण प्रमुखलाई आयो मा’र्ने धम्की, को हुन् धम्क्याउन व्यक्ति ?
१२राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चुन्न मतदान जारी
६ महिनापछि खुल्यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन, नयाँ निर्देशिकाअनुसार परीक्षा
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ६ महिनापछि नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को आवेदन खोलेको छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि महामारीको कारण देखाउँदै बन्द गरेको आवेदन प्रणाली सोमबमार रातिबाट खुलेको विभागले जनाएको छ ।
प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार सोमबमार रातिबाट आवेदन प्रणाली खुला भएको र अब नियमित रुपमा फारम भर्न सकिने बताए । कोरोनाको कारण देखाएर लामो समय आवेदन रोकेका कारण नयाँ चालकहरु समस्यामा थिए ।
प्रवक्ता भुसालका अनुसार अब दैनिक रुपमा कार्यालयको कोटा निर्धारण गरेर दैनिक रुपमै आवेदन लिन थालिएको छ । कार्यालयहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार कोटा तोकेर आवेदन खुलाएका छन् ।
‘विगतमा जसरी ‘भिजिटिङ मिति’ तोकेर असीमित आवेदन लिदैँनौं,’ उनले भने,’दैनिक रुपमा कोटाअनुसार भोपल्टको भिजिट मिति दिन्छौं, पहिले आवेदन दिएका धेरै जना अहिले पनि परीक्षा कुरिरहनुभएकाले उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिने योजना छ ।’
नयाँ निर्देशिकाअनुसार परीक्षा
नयाँ आवेदन दिनेहरुले अब विभागले ल्याएको अंकभार प्रणालीअनुसार परीक्षा दिनेछन् । लिखित परीक्षामा अब ४/४ नम्बरका २५ प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती प्रश्नको अंकभार सय नम्बरको हुनेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार लिखित परीक्षामा ६० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार विभागले परीक्षाका लागि ५०० वटा वस्तुगत प्रश्नको संग्रह सार्वजनिक गरेको छ । त्यसभित्रैबाट प्रश्न सोधिने छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले अब लाइसेन्सका लागि अङ्कभारमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हुनेछ ।
हाल प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटै गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ । तर, नयाँ निर्देशिकामा ट्रायलका विभिन्न चरणलाई फरक-फरक अंकभार दिइएको छ र ७० अंक ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य हुनेछ । अर्थात् सामान्य गल्ती गरे पनि लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।
महामन्त्रीमा कुन्तीसँग हारेपछि रेखा थापाले दिइन यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भनिन ?